टीकाकै दिन अस्पतालमा, खानपानमा ख्याल पुगेन
टीकापुर । खानपानमा सन्तुलन नमिल्दा जोशीपुरका सन्देश चौरासिया टीकाको दिन पनि अस्पतालमै रहनुपर्यो । विस्तृतमा
तीन दिनसम्म मौसम सामान्यतया सफा रहने अनुमान
आज गण्डकी प्रदेशमा कति कोरोना संक्रमित थपिए ?
अब हप्ताको दुई दिनमात्रै कोभिड– १९ प्रेस बिफिङ हुने
गोविन्द केसीसँग बार्ताका लागि सरकार तयार, केसी अटेरी !
जुम्ला । १४ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका डा गोविन्द केसीका मागबारे छलफल गर्न सरकार तयार देखिएको छ ।
किन बनिनसक्दै भत्काइँदैछ कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्ड ?
काठमाडौं । निर्माणाधीन चक्रपथको कोटेश्वर–कलंकी सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न हुनेबित्तिकै सडक भत्काउने योजना बनिसकेको छ ।
सलमान खानलाई नेपाल ल्याउने भन्दै ठग्दै सिमान्त, यसरी परे प्रहरी फन्दामा !
काठमाडौं । बलिउड सपुरस्टार सलमान खानलाई नेपाल ल्याउन लागेको ओडीसी इन्टरटेन्मेन्टका प्रबन्ध निर्देशक सिमान्त गुरुङ पक्राउ परेका छन् ।
गृहमन्त्री बादल र उत्तर कोरियाली राजदूत भेटवार्ता, के के भयाे कुराकानी ?
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग नेपालका लागि उत्तर कोरियाका राजदूत किम योङ हकले आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
पानी ट्यांकीमा डुबेर २३ वर्षीय सुभाषको मृत्यु, परिवारद्वारा किटानी जाहेरी
भक्तपुर । सूर्यविनायक नगरपालिका–३ बालकोट नयाँ बस्ती बस्ने २३ वर्षीय सुभाष चौलागार्इंको हिजो पानी ट्यांकीभित्र डुबेर मृत्यु भएको छ ।
गाई संरक्षण गर्न भागवत महायज्ञ
काठमाडौँ । स्थानीय गाईको संरक्षणका लागि इच्छा लाग्नेबाट सहयोग संकलनका लागि श्रीमदभागवत ज्ञान महायज्ञ शुरु भएको छ ।
अझै तीन दिन देशका अधिकांश भेगमा बदली र वर्षा
काठमाडौँ । मनसुन वर्षाको प्रभाव देशभरि नै रहेकाले अझै तीन दिनसम्म देशका अधिकांश भेगमा बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
वाग्लेले पाए कान्तिपुर दैनिकको प्रधान सम्पादकको जिम्मेवारी
काठमाडौं । सुधिर शर्माले कान्तिपुर दैनिनको प्रधान सम्पादकबाट राजिनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा नारायण वाग्ले नियुक्त भएका छन् । थापाथली बिजनेस पार्कस्थित कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको कर्पोरेट कार्यालयमा वाग्ले नियुक्त भएका हुन् । वाग्लेको नियुक्तीको औपचारिक घोषणा भने व्यवस्थापनले केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।
सर्पदंशसहितको उपचार केन्द्र निर्माण हुँदै
बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका– १० स्थित बनकट्टीमा सर्पदंशसहित अन्य रोगको उपचार केन्द्र निर्माण गरिएको छ । सो उपचार केन्द्रको ९० प्रतिशत काम पूरा भएको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मीनप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
आठ डिआईजीसहित दुई एसएसपीले पाए अवकाश, एआईजीको लागि चर्को प्रतिष्पर्धा
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका ८ डिआईजी र २ एसएसपीले अवकाश पाएका छन् । प्रहरी नियमावलीमा विद्यमान ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधानअनुसार उनीहरुले अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् ।